Maanta Oo Kale Sanadkii 2016: Nemanja Vidic Oo Ku Dhawaaqay Howl Gab
Home Wararka Ciyaaraha Maanta Maanta oo kale sanadkii 2016: Nemanja Vidic oo ku dhawaaqay howl gab
Ciyaaryahankii hore ee Manchester United kabtan Nemanja Vidic ayaa ku dhawaaqay inuu ka fariistay ciyaaraha kubada cagta sanadkii 2016.
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Serbia ayaa ku dhawaaqay arintaas isagoo jira 34, isagoo sheegay in dhaawacyada ay ku qasbeen go’ankiisa.
Vidic, oo xulkiisa u saftay 56 jeer, ayaa United kaga soo biiray Spartak Moscow intii lagu jiray suuqii Janaayo ee xilli ciyaareedkii 2005-06, isla markaana wuxuu si dhaqso leh ula qabsaday daafaca Rio Ferdinand iskaashi dhexe oo adag .
Seddex sano oo qurux badan oo uu joogay Old Trafford wuxuu arkay inuu ku guuleystay 10 abaalmarino waaweyn, oo ay ku jiraan shan horyaal oo Premier League ah iyo Champions League.
Wuxuu ka tagay United oo wuxuu ku biiray Inter Milan bishii July 2014 wuxuuna u ciyaaray 28 jeer xilli ciyaareedkiisii ​​ugu horeeyay ee kooxda reer talyaani, laakiin qaliinka hernia iyo dhibaatooyinka dhabarka ayaa la micno ah inuu ku guuldareystay inuu u ciyaaro Nerazzurri intii lagu jiray ololihii 2015-16, wuxuuna ka fariistay bartamihii xilli ciyaareedka .
Previous articleKooxda Isbuuca ee Premier League – Sadio Mane, Riyad Mahrez, Bukayo Saka oo kasoo muuqday
Next articleXiddiga Chelsea ayaa go’aan ka gaaraya mustaqbalkiisa ka dib magacaabista Thomas Tuchel